Ahoana ny fomba fiasa - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Amin'ireto dingana haingana sy tsotra ireto dia afaka manampy amin'ny fanafoanana ny aretin'andoha feno sy manampy anao hampitombo ny asanao ny Sunsoneorot. Fahatanterahana haingana sy marina miaraka amin'ny lisitra fitehirizam-bokatra ao anaty sy fampahalalana momba ny fanarahana
STEP 1- VAHAOLANA namboarina
Vonona ny hamoaka ny fahatanterahanao ve? Mifandraisa Sunsoneorot ary mpitantana fampandrosoana ny orinasa dia hotendrena ho fanohanana mandritra ny fizotrany rehetra. Ho an'ny mpivarotra tsirairay, hodinihinay ny vokatrao, ny filanao lisitra, ny tsena kendrena ary hamaly ny fanontaniana rehetra mety hanananao. Aorian'izany dia hojerentsika ny filan'izy ireo ary hanome ny vahaolana feno sy fandefasana entana.
STEP 2- MANDEVA INVENTORIANA NY Sunsone mampiseho
Rehefa avy namorona ny kaonty mpampiasa maimaimpoana ianao dia miangavy anao hamorona ASN (Fampandrenesana fandefasana farany) ary alefaso any amin'ny foibe Sunsoneorot ny lisitry ny vokatrao. Tsy misy farafahakeliny takiana volume, mandefasa entana betsaka araka izay tianao. Afaka manararaotra ny tahan'ny fandefasana fihenam-bidy mivoaka ivelan'ny trano ny orinasa.
Ny ekipanay dia mandray ny tahirinao, manao fanamarinana amin'ny antsipiriany, maka sary na mitarika QC amin'ny famaritana anao, avy eo mitady trano ho azy ao amin'ny foibe fanatanterahana ny baiko nofidinao, azonao atao ny manara-maso sy mifehy ny lisitrao amin'ny alalàn'ny kaonty。
Dingana 3 - FAMORIANA
Mametraka baiko amin'ny alàlan'ny tranonkalanao ecommerce ny mpanjifa, ary apetrakao amin'ny ekipa Sunsone mampiseho izany amin'ny alàlan'ny API, ampidiro amin'ny alàlan'ny CSV na hamoronana baiko.
Ny kaontinao dia voaray ary nojerena mivantana ao amin'ny rafitray amin'ny alàlan'ny rafitra fitantanana trano fitehirizan-trano ao an-trano.
Dingana 4 - PICK, PACK AND TRIPING TRANO
Vantany vao mandefa baiko ao amin'ny kaonty kaonty ianao alohan'ny hampiatoanay ny fotoana, Sunsone mampiseho dia tanteraka tamin'io andro io ihany. Haka sy hanangona tsara izahay ary handamina haingana ny fandefasana iraisam-pirenena. Mandritra izany fotoana izany dia avela hanana fahitana sy fanaraha-maso feno ianao amin'ny fanatanterahana amin'ny alàlan'ny foiben'ny kaonty.
Ny ekipa mpanatanteraka manam-pahaizana dia misafidy sy manangona ny baiko am-pitandremana ary ampidiro izay fampidirana na fitaovana fampiroboroboana tianao.
Ny fanoloranay anao ny fahitana ny fizotran'ny fizotrany manontolo amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia amin'ny trano fitehirizana mankany amin'ny tokonam-baravaran'ny mpanjifanao.
Dingana 5- CONSIGNEE RESEIVE PARCEL
Aorian'ny andro fitaterana iray dia mahazo parcels ny mpanjifa. Tsy vitan'ny hoe manatanteraka sy manome ny entanao ihany izahay, fa manome fahafaham-po ny mpanjifa koa.
Moa ve ianao mieritreritra ny famindrana ivelany ny fahatanterahan'ny eCommerce anao any Shina? Mifandraisa aminay azafady.